Fanaovana « service minimum » Mety hampihanaka ny valan’aretina
Tokony hanaja ny “confinement” izay nolazain’ny filoham-pirenena ny olom-pirenena rehetra, mba tsy hiparitahan’ny valan’aretina coronavirus, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra mpahay toekarena iray tsy nitonona anarana.
Nambarany fa mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana isika amin’izao, ka tokony hanaja ireo fepetra rehetra napetraky ny fitondram-panjakana ny olona. Tsy tokony ho maika hangataka ny “service minimum” eny amin’ny biraom-panjakana isika, hoy izy ka anisan’ireny ohatra ny fanaovana ny permis biometrika. Mahatonga ny fihanaky ny valan’aretina vetivety mantsy ny fitangoron’olona ary tsy ho voafehy., Eo ihany koa ny tsy fanajana mihitsy ilay elanelana 1 metatra. Tsy fantatra intsony izay olona mitondra ny tsimok’aretina satria tsy voatery hisy soritr’aretina na marary fa mety olona mijoro tsara.